Wasiir Beyle oo kulan la qaatay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya. – Radio Muqdisho
Wasiir Beyle oo kulan la qaatay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, (XFS) mudane, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kulan Muqdisho kula qaatay Safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya mudane Dr. Mehmet Yilmaz.
Kulanka ayaa looga hadlay hormarka dhaqaalaha, dib u habeynta Maaliyadda iyo Barnaamijka Dayn cafinta oo dowlada Soomaaliya ay ka gaartay guulo badan.
“Wadahadal mira-dhalay, isla markaana ku saabsanaa horumarka dhaqaalaha, dib-u-habeynta Maaliyadda iyo Barnaamijka Deyn-cafinta Dalka ayaan galabta la yeeshay Safiirka Dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga H. E. Dr Mehmet Yilmaz” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay taageeradooda aan kala go’a laheyn ee ay la garab taaganyihiin dib u kabashada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Khayre: Hannaanka Guud ee Lagu Gaarayo Hadafyada Horumarka Waara Ma Aha Inuu Hannaan Qura Ku Habboonyahay Xaaladaha Oo Dhan
Wasiirka Waxbarashadda XFS oo Paris uga qeyb galay Shirweyne labadii sano mar ka dhaca Xarunta UNESCO.